Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso. Xarun magaceedyada Bog Wadahadal.
Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha. Siyaasadda iyo Xukunka Soomaaliya.
Madaxweynihii dhawaanta xilka laga qaaday ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo wali ku adkaysanaya in uu yahay madaxweyne ayaa hoggaanka dowladda federaalka ku eedeeyay in ay ka dambeeyeen in isaga xilka laga qaado. Qodobka aad-Bannaanaanta Xaafiiska Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa.
Cutubka 8aad Fedegaalka Federaalka. Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka federaakka ah kuwa mooshinka gudbiyay ayaa sheegay: Waxaa dhacday hadda ka hor in nin Hindi ah oo Deganaasho ku leh Dubay iyo Nayroobi uu soomaqliya Baasabooro Soomaali ah taasoo fadeexad ku noqotay Laanta socdaalka Soomaaliya.
Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha. Haddii qofna shuruudahaas buuxin feseraalka waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay.
Qoraalka gudaha oo kooban. Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen jagada madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Markaas Soomaaliya qeyb qeyb ayay ahayd oo laba gobol ayaa dowlado dhistay kuwaasoo ahaa kuwo shaqeynaaya oo leh dastuuradooda. Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka. Isfaham darada mararka qaar soo kala dhexgasha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa mid aad u qoto dheer oo soo jiitamayay muddo dheer.
Haddii la qaato nidaamka madaxweynennimada nambarada qodobbada hoose way is badalayaan. Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku federraalka bog cusub.
Sidoo kale waa in lagu sameeyo asaaska ah ‘ ka qeybgalka buuxa ee dadka’ Qodobkaiyo la tashiga. Ciidanka soomaaliya waxaa la sameeyay kii, waa markii ay soomalaiya xornimadeeda ka qaadatay gumeeysta-yaashii Ingriiska iyo Talyaaniga. Ciidamada Soomaaliya waxay ahaayeen ciidanka ugu xoogan qaarada afrika Afrikada Madoowmarka laga eego Baaxadiisa iyo lacagta ku bixi jirtay iyo qalabka uu watay. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa.
Kadib markii lasoo xulay Xubnaha Baarlamaanka Ayeey waxay doorteen Gudoomiyaha Baarlamaanka ama Ffderaalka, waxay markale duurteen Madaxweyne oo isgana sii xushay Raiisul wasaare, Sidaas ay dawladdu ku tahay Baarlamaani oo wax walba Baarlamaanka ayaa soo go’aaminaya. Bishii June maamul goboleedyada Puntland iyo Soomaaiya ayaa sidoo kale kasoo horjeedstay xeerka isgaarsiinta qaranka oo golaha wasiirada meelmariyeen, waxayna maamulada sheegeen in dowladda federaalka ay hareermartay waxyaabihii horey looga heshiiyay ee xeerkan ku saabsanaa oo dhan.
Cutubka 16aad – Qodobbada Guud. Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub.
Xildhibaanadan ayaa sidoo kale ka dalbaday dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta in ay ixtiraamto madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale lagu soo dhaweyn karaa in jiritaano kale lagu soo dhaweeyo in ay ku soo biiraan Federaalka, waa hadii ay doonayaan. Soomaaliya Waxay kamid tahay Dalalka ugu Dastuurkq aduunka, Ma jiro Fayo-dhawr guud oo kafaala qaadaya caafimaadka asaasiga ah ee Muwaadinka Soomaaliyeed. Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada.
Nidaamka Federaaliga ah qeyb kama uusan fedefaalka qorshihii hore ee Soomaaliya markii laga asaasayay midoobidii dhulalkii ay kala gumaysan jireen Ingiriiska iyo Talyaaniga. Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Madaxweynuhu wuxuu iscasilaadiisa u gudbinayaa Golaha Shacbiga isagoo sii marsiinaya Afhayeenka Golaha Shacbiga. Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa Qaranka iyo xukuumadda, federaxlka astaanta midnimada Qaranka.
Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo federaaloa xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa.
Hadaba, halkuu ku dhammaan federraalka khilaafka soo kala dhex galay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya? Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga ayaa go,aan ka gaari doona midka saddexdaas arimood la qaadanayo marka sidaa laga maqlo la tashiga dadweynaha. Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa la sheegaa in Soomaaliya ay saldhigyo ku leedahay iyo in maamul goboleedyada Soomaaliya u gacan dhaafeyso dowladda dhexe, sida ay xildhinaabada Soomaaliya ku eedeeyeen.